Kuze kube yizigidi ezingama- $ 5 ngosuku ngenxa yokuchofoza okungamanga kwezikhangiso | Izindaba zamagajethi
Sonke siyazi ukuthi umkhakha wokukhangisa ungenza imali eningi. Injalo-ke le ndaba yokuthi kwesinye isikhathi uzobe ufundile ukuthi ngamakhasi e-web wezigidi zezivakashi ngosuku ungangenisa kanjani imali ephezulu kakhulu futhi wenze namavidiyo we-YouTube lapho bengekho khona abasebenzisi abambalwa abathola amashumi ambalwa ngenyanga ngalokho kuphela thumela amavidiyo emsamo.
Kuyiqiniso ukuthi sikhuluma ngezindaba zempumelelo ezingahambelani neqiniso langempela eliphilwa inyanga nenyanga, yize kusebenza ukuchaza ukuthi kunabantu abanjani abahola imali eningi ngenxa yomkhakha wezokukhangisa nomsebenzi omuhle . Kulesi senzakalo ngifuna ukwethula kuwe icala lapho indlela elula ikhethwe khona, iqembu labaduni abathi, ngenxa yolwazi lwabo olubanzi, bakwazi ukuthola phakathi kwezigidi ezintathu kuya kwezi-3 zamaRandi ngosuku ngenxa yomsebenzi wakho. Lokhu yilokho abaqinisekisa ngakho I-White Ops.
Iqembu labaduni baseRussia likwazi ukukhwabanisa imboni yezokukhangisa.
Leli qembu labaduni, elibhabhadiswa ngabafana abavela eWhite Ops njengo I-AFK13, of Ukukhwabanisa Kwesikhangiso Komandabasebenze kusukela ngoSepthemba 15, yize bekungaze kube ngo-Okthoba 2016 lapho bekwazi ukusebenza ngamandla abo amakhulu. Ngaso sonke lesi sikhathi iqembu selisebenzile dala izizinda ezingaphezu kwe-6.000, ebhaliswe ngamagama abebonakala sengathi angawezinkampani ezinkulu ngokulandelana, asevele engesizinda uqobo, ukudala Ama-URL ahlukile angama-250.000 okuqukethwe okuwukuphela kwesikhangiso sevidiyo.
Inani langempela lawo wonke lo msebenzi kube ukukhohlisa i-algorithm ekhetha ama-URL lapho kukhonjiswa khona izikhangiso ukukhetha isikhala sabo sokukhangisa kwamanye amawebhusayithi. Ngemuva kokuthola lokhu, iqembu belilokhu lisebenza ekwakheni ifayela le- ipulazi le-bot isetshenziswe ezindaweni ezahlukahlukene zedatha ukuze kudale ithrafikhi kumakhasi abo ewebhu ngenkathi kufakwa izikhangiso.
Ngale ndlela elula, noma okungenani ukuyichaza kubonakala kulula, lawo mabhoti akwazi ukufinyelela izikhangiso ezingaba yizigidi ezingama-300 ngosuku ukuthola imali yokukhangisa, njengoba ubona, bekuphakeme impela.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Kufika ku- $ 5 million ngosuku ngenxa yokuchofoza okungamanga
IXiaomi Mi Mix emhlophe iseduze